सङ्गीत साधक दियालीको जीवनः कष्टबाट शुरु, साधनाबाट मक्ख ! « MNTVONLINE.COM
सङ्गीत साधक दियालीको जीवनः कष्टबाट शुरु, साधनाबाट मक्ख !
‘इलाम । जातीय भेद्भाव कस्तो हुन्छ’ भनेर जान्न मन लागे इलामका सङ्गीत साधक राम दियालीलाई सोधे हुन्छ । दलित समुदायमै जन्मेका कारण कुनै बेला कस्ता सकस भोग्नु प¥यो दियालीलाई मात्र थाहा छ । कुरा २००६ सालको हो । अनेक विभेद्पूर्ण व्यवहार थिए त्यसबेला । समाजमा उच्च र निचको बहस चल्थ्यो । विभेद एक ठाउँमा केन्द्रित थिएन, जताजतै थियो ।
एकदिनको कुरा हो, दियालीले कसैले बाँसुरी बजाइरहेको देखे । एउटा बाँसको ठुटोबाट सुमधुर धुन निस्किरहेको देखेपछि दियाली त्यतैतिर तानिए । नजिक पुगेर हेर्दा एउटा बाँसमा केही खाल्डा पारिएको देखे । “बाँसबाट आएको आवाजले मलाई अचम्म लागिरहेको थियो । सामान्य चिज बाँसबाट पनि यस्तो आवाज आएको देख्दा जान्न मन लाग्यो”, दियालीले भने, “त्यही देखेर घर गएर बाँसुरी बनाउन थालेँ । बाँसुरी बन्यो तर बजेन । अघि सुमधुर बजेको बाँसुरी र अहिले बजाएको बाँसुरी तुलनै नगर्ने किसिमको भयो । मलाई हुनसम्म तनाव भयो ।”
अब दियालीलाई खपिनसक्नु भएन । जसरी पनि बाँसुरी बजाउनु थियो तर कसरी बजाउने पत्तो थिएन । पहिले बाँसुरी बजेकै ठाउँमा दिनानुदिन धाउन थाले । ती व्यक्ति भेटिए पनि तर बाँसुरी बजाएको अवस्थामा भेटिएनन् । ती व्यक्ति थिए, तत्कालीन जिल्ला प्रशासन कार्यालयका बडाहाकिमको सुरक्षार्थ खटिएका सुरक्षाकर्मी ।
सङ्गीतको उर्वरभूमि दार्जिलिङमा केही समय बस्दैमा धेरै कुरा ख्याल हुँदै गयो । दियालीको लगाव देखेर चार आना भारुमा भिनाजुले बाँसुरी किनेर बिदा गरे । दियालीको मन बाँसुरीमा मात्र होइन, हारमोनियमतिर पनि तानिन थाल्यो । सदरमुकाममै बसेर हारमोनियम बजाउने श्यामकृष्ण श्रेष्ठकोे ज्ञान र सीपले दियालीलाई हारमोनियम बजाउन आतुर पारेको थियो । समयान्तरमा श्रेष्ठकै सङ्गतमा दियालीले हारमोनियम पनि धेरथोक सिके तर भइ दियो के भने बाँसुरी बजाउन भने छाड्नु पर्ने भयो ।
बाँसुरीबाट साङ्गीतिक खुड्किला उक्लिएका दियालीले अनेक वाद्यवादन समाउन पाए । समाएर आफ्नो मन र स्रोतको मनोविज्ञानअनुसारको धुन निकाल्न सक्ने भए तर गायकी भने सुध्रिएन ।
वाद्यवादकसँगै असल गायक बन्ने दियालीको धोको कहिल्यै पूरा भएन । “बाह्र÷पन्ध्र वर्षकै उमेरमा सिकेको भए हुने थियो । ठूलो उमेरमा सिक्दा गाउन सकिनँ । मैले एककिसिमले गायकीमा हारेँ”, उनले भने । स्वर बनाउनका लागि दियालीले अनेक प्रयत्न गरे । गायक अमर गुरुङ, जितेन्द्र बर्देवालगायतलाई गुनासो पोखे तर भएन । अहिले पनि दियाली प्रयत्नरत छन् तर मिल्दैन ।
बाल्यकालमा विभेद खेपेका दियालीलाई समयान्तरमा पनि विविध विभेद आए । बालकमा जस्तो सिधै नभने पनि बङ्ग्याएर दियालीमाथि विभेदका स्वर खनिए । वाद्यवादक भए पनि दलित भएकाले अनेक जिम्मेबारीबाट हट्नुपरेको दियाली सुनाउँछन् । कुनै संस्थाको अध्यक्ष भएको भन्दै अस्वीकार गरे भने कहिले आफू उच्च पदमा हुँदा संस्था विघटन गरेको भन्दै विवादमा तानिए । कहिले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाइयो भने कहिले संस्थाबाटै निकालियो ।
दियाली भन्छन्, “मेरो यो धर्तीमा फेरि जन्म भए दलितको कोखबाट चाहिँ नहोस् ।” कुनै बेला ‘देवकोटा प्रतिष्ठान’का अध्यक्ष थिए दियाली । राजाका कार्यक्रममा प्रोत्साहन गरेको आरोप लागेपछि सबै वाद्यवादनबाटै दियालीले हात धुनुप¥यो । “राजाको राज्याभिषेक गर्ने बेलामा काम गर्नुप¥यो भनेर सिडिओ साहेबले भने, मैले सक्दिनँ भन्दाभन्दै बाजा नभए हामी मिलाइदिन्छौँ भने र कार्यक्रम राखियो”, दियाली भन्छन्, “त्यसपछि फेरि अर्को संस्था जन्मियो देवकोटा कलाकुञ्ज, हामी खुसीले रमायौँ तर मलाई कार्यक्रममा प्रोत्साहन नगरेको पाएँ । अनि वाद्यवादनप्रति वितृष्णा पाएँ ।” अनेक समयमा विभेद सहनुपरेको दियाली सुनाउँछन् ।
इलाम प्रगतिशील साहित्य समाज काठमाडौँले २०६३ सालमा गरेको सम्मान चाहिँ उनको सबैभन्दा प्यारो छ । यो सम्मान दियालीका लागि सम्मान मात्र होइन, पारिश्रमिक समेत हो । उनको पहिलो पारिश्रमिक नै सम्मानबाट आएको एक हजार हो । उनी त्यसपछि भने अन्य संस्थाबाट पनि सम्मानित भए । उनी सनलाइट सङ्गीत विद्यालय तथा रेकर्डिङ स्टुडियो बिर्तामोड, फूलपाती कार्यक्रम आयोजक समिति बरबोटे, माउन्ट मेरिया वेन्ड देउरालीलगायतबाट समेत सम्मानित भएका छन् ।
यस्तै २०५५ सालमा नारायण गोपाल स्मृति पुरस्कार, इलाम नगर (२०५५)बाट अभिनन्दित भए । यसैबीचमा दियालीले ‘व्यथा र अनुभूतिहरू’ नामक पुस्तक निकालेका छन् । गीतीकविता सँगालोमा दियालीको भोगाइ र गीत छन् । यस्तै दियाली गत वर्ष इलाम नगर साहित्य कला सङ्गीत प्रतिष्ठानबाट समेत पुरस्कृत भएका छन् ।